Fabinho Oo Soo Bandhigay Halka Arin Ee Uu Jurgen Klopp Ka Doonayo Isaga In Uu Ciyaartiisa Ka Badalo. - Gool24.Net
Fabinho Oo Soo Bandhigay Halka Arin Ee Uu Jurgen Klopp Ka Doonayo Isaga In Uu Ciyaartiisa Ka Badalo.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa xidiga kooxdiisa ee Fabinho ka dalbaday in uu isbadal ka sameeyo ciyaartiisa xili ciyaareedka cusub ee dhawaan bilaami doona.
Fabinho ayaa door muhiim ah ka soo ciyaaray guulihii Liverpool ee koobabkii badnaa ee ay ku soo guulaysteen labadii sanadood ee ugu danbeeyay wuxuuna ka mid noqday ciyaartoyda dhexda danbe ee Premeir League ugu fiican.
Laakiin Jurgen Klopp ayaa doonaya in Fabinho uu horumariyo shaqo kale oo uu ku fiican yahay taas oo kooxdiisa Reds ka caawin karta in ay guulo hor leh gaadhi karaan.
Klopp ayaa Fabinho ka dalbaday in uu sameeyo darbooyin goolka ah oo uu awood u leeyahay in uu goolal ku dhalin karo sidii uu soo sameeyay kulamadii Anfield ee Manchester City iyo Crystal Palace.
Fabinho ayaa laba gool oo mataano ah ku dhaliyay darbooyin uu ku tuuray kulamadii Man City iyo Crystal Palace laakiin Klopp ayaa aaminsan in Fabinho uu arintan horumarin karo oo uu goolal badan kooxdiisa ugu keeni karo.
Fabinho oo ka hadlaya sida uu Klopp markastaba isaga uga doono in uu sameeyo darbooyin uu goolal ku dhalin karo ayaa yidhi: “isagu markastaba waxa uu igala hadlaa wax taas ku saabsan, oo ah in ay waajib igu tahay in aan in badan darbeeyo, sababtoo ah tayadan ayaan leeyahay. Waan isku dayi doonaa”.
“Anigu waan ogahay in aan samayn karo, waxaa waajib ah in aan marar badan isku dayo kulamada. Mararka qaar waxaan helaa fursada aan meelo fog uga soo darbayn karo taasna ma sameeyo, sababtoo ah waxaan ka door bidaa in aan baaso” ayuu Fabinho hadalkiisa raaciyay.
Fabinho oo ka hadlaya goolashii uu xili ciyaareedkan ku dhaliyay darbooyinka uu Klopp ka doonayo in uu sameeyo ayaa yidhi: “Laakiin laba gool oo fiican ayaan xili ciyaareedkii hore ku dhaliyay, kaliya waa in aan ku tababarto oo aan in yara badan ciyaaraha isku dayo”.
Fabinho oo Liverpool kaga soo biiray kooxda AS Monaco intii lagu jiray sanadkii 2018 kii ayaa ka mid noqday ciyaartoyda uu Klopp sida tooska ah ugu tiirsan yahay.